अमेरिकाले दिने भयो नेपालीलाई अर्को खुसीको खबर, जुन दक्षिण एसियामामै पहिलो हुदै छ नेपाल ! राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय « Light Nepal
अमेरिकाले दिने भयो नेपालीलाई अर्को खुसीको खबर, जुन दक्षिण एसियामामै पहिलो हुदै छ नेपाल ! राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
Published On : 13 September, 2017 10:56 am
अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकी फ्ल्यागसिप कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध हुने भएको हो ।
यसबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार दुईपक्षीय सम्झौता हुने निश्चित भएको छ ।
अमेरिकी कंग्रेसद्वारा नेपालको विषय र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे लामो समीक्षा भई यसमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सहयोग रकमबाट करिब ३ सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सडक मर्मत सम्भार र सुधारका लागि काम गरिनेछ । तोकिएको स्थानमा सडक मर्मतपछि नयाँ सडक निर्माणमा समेत खर्च हुने उल्लेख छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्प नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल परेको यो सहयोगले पुष्टि गरेको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोग र सम्बन्ध विस्तारअनुरूप अमेरिकाले परियोजना केन्द्रित यो ठूलो सहयोग नेपाललाई गर्न लागेको हो । यो सहयोग दक्षिण एसियामा अमेरिकाले गर्ने सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो हो ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्व टिम मंगलबार अमेरिका प्रस्थान गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा हुने उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट कार्की र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री जोहन जे सुलिभानले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
क्षेत्रीयस्तरमा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्तो सहयोग अमेरिकाले गर्ने भएको हो । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । यसमा अमेरिकाले ५० करोड डलर सहयोग गर्छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नुपर्ने हुन्छ ।
क्षेत्र र परियोजना तय गरेर अमेरिकाले सहयोग गर्न लागेको हो । यो सहयोगअन्तर्गत काम समापन गर्ने मितिसमेत निश्चित छ । हस्ताक्षर भएको दिनदेखि पाँच वर्षभित्र सहयोग सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा रकम फिर्ता जानेछ ।
एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई दिने अनुदान स्वीकृत गरेको चार सातापछि यो सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौता भएपछि यो रकम विकास परियोजनामा समय सीमा तोकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । ट्रम्प शक्तिमा आएपछि स्वीकृत गरेको एसीसीको यो पहिलो ठूलो कार्यक्रम हो । त्यो कार्यक्रम नेपाललाई नै परेकाले लामो छलफल भएको थियो ।
अमेरिकाले वैदेशिक सहायता घटाइरहेको भनिरहेको अवस्थामा नेपालले यो प्रकारको सहयोग पाउन लागेको हो । लामो समयपछि अमेरिकाले एकैपटक ठूलो लगानीमा काम अघि बढाउन लागेको हो । अमेरिकाले नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा दिन लागेको दुईपक्षीय उक्त अनुदान सहयोग उसले नेपाललाई गरेको एकमुष्ट सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो रहेको धारणा अमेरिकीहरूकै छ ।
अमेरिकी संसदको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहभागिता रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपालमा प्राथमिकतामा राखेर सन् २०१४ देखि अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै एमसीसीको ठूलो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रममा नेपालको लागि स्वीकृत भएको हो ।
अमेरिकी सहयोगको उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको थियो । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको र अहिले सम्झौता मन्त्रीस्तरमा हुन लागेकाले आफूलाई खुसी लागेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध तथा सहकार्यको यो पछिल्लो उदाहरण हो । अमेरिका नेपालको विकास प्रक्रियामा निकै सकारात्मक छ । हामीले पनि विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू तय गर्दै गएका छौं ।’
नेपाल सरकारबाट लगानी रहने उक्त कार्यक्रममा सरकारको पनि अपनत्व रहने हुनाले थप प्रभावकारी बन्ने उनको छ । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नका साथै एमसीसीको नीतिगत स्कोर बोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनअनुरूप नै यो सहयोग आएको धारणा अर्थ मन्त्रालय र नेपाली दूतावास डीसीको छ ।
नेपालले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गरी यसै वर्ष दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने तेस्रो चरण निर्वाचनको लहर चलिरहेको अवस्थामा यो सम्झौता हुन लागेको हो । साभार – कान्तिपुर